प्रविधि विकासमा उदाहरण बन्दै बंगलादेश
२०७६ पौष १२ शनिबार, काठमाडौं। पछिल्लो विश्वका विभिन्न प्रमुख वित्तीय संस्थाहरुले दक्षिण एसियाको अर्थतन्त्र सबैभन्दा तीव्र गतिमा अघि बढ्ने प्रक्षेपण गरेका छन्। समग्र विश्व अर्थतन्त्र सुस्ताइरहँदा दक्षिण एसियाको अर्थतन्त्रमा देखिएको आशालाई नेपाललगायतका सबै मुलुकले अवसरको रुपमा लिन सक्छन्। त्यसो त विश्व अर्थतन्त्र नै समस्यामा पर्दा पनि दक्षिण एसियाको अर्थतन्त्र सुधारको दिशामा देखिएकोले नै यस्तो प्रक्षेपण गरिएको हो। ... बाँकी अंश»
के हो आत्मज्ञान, कस्ले दिलाउन सक्छ ?
२०७६ पौष ११ शुक्रबार, काठमाडौं। ब्रह्माले गरेको आत्माज्ञानको चर्चा सुनेपछि देवताका राजा इन्द्र र असुर सम्राट विरोचनले ज्ञान प्रप्तिको उद्देश्यले दुवैले बत्तीस वर्षसम्म ब्रह्माजीको सेवा गरे। तपस्या गरे । त्यसपछि ब्रह्माजीले भने,' हे देव असुर ! जब आत्मज्ञान हुन्छ त संसारबाट निवृत्ति हुन्छ । व्यक्तिले असीम आनन्दलाई प्राप्त गर्छ ।' दुवैले भने, ' हे बह्मदेव ! हामीलाई आनन्द त प्राप्ति भएन तर हामीले आफुले आफुलाई चिन्यौ । हामी जलाशयमा गएर आफुले आफुलाई हेरेर आयौं ।' ... बाँकी अंश»
चेक गणतन्त्रको प्रागमा किन फहराइन्छ तिब्बती झण्डा ?
२०७६ पौष १० बिहिबार, काठमाडौं। पछिल्लो केही समययता छिमेकी मुलुक चीनको विषयमा विभिन्न किमिसका समाचार आइरहेका छन्। चीनले विभिन्न योजनाको माध्यमबाट विश्वभर प्रभाव बढाउँदै लगिरहँदा केहीले यसको पक्षमा र केहीले यसको विपक्षमा वकालत गर्दै आएका छन्। ... बाँकी अंश»
राजाले चलाउन नसकेको राज्य कसरी चलाए गुरुका सेवकले?
२०७६ पौष १० बिहिबार, काठमाडौं। एक राजाले आफ्नो प्रजाको पालन गर्नमा बढी परिश्रम गर्थे। आफ्नो प्रजाको धेरै ख्याल राख्थे । एक दिन दुःखी भएर राजा आफ्नो गुरुकोमा गए जो एउटा रुखमुनि बस्थे। ... बाँकी अंश»
राष्ट्रपतिको असंवैधानिक शक्ति अभ्यासका श्रृंखला
२०७६ पौष १० बिहिबार, आलंकारिक राष्ट्रपतिले निरन्तार रुपमा कार्यकारी हुन खोजेको अवस्था वारम्वार प्रकट हुँदा पनि त्यसमा सचेत गराउनुको साटो वास्तविक कार्यकारीले त्यसतर्फ निरन्तर उक्साइरहेको पाइयो । यसले त्यो पद त अपेक्षा गरिए अनुसारको मर्यादित त रहेन नै कतै देशमा द्वैध शासनको अभ्यास सुरु भएको त होइन भन्ने प्रश्न खडाहुन थालेका छन् । यसले निम्त्याउने अनिष्ट सत्तारुढलकै लागि पनि अमिलो हुनसक्तछ । ... बाँकी अंश»
शहर घुसेको गाउँ र हल्काकरण
२०७६ पौष १० बिहिबार, प्रसारवादी अबधारणा अनुरुपको विकासले प्रायः सबै क्षेत्र , समुदाय र भूगोललाई अंगालेको पाइन्छ । ... बाँकी अंश»
श्वेतको घरमा यमराज र मृत्युकै मृत्यु भएको दिन
२०७६ पौष ९ बुधबार, काठमाडौं । गोदावरीको तटमा 'श्वेत' नामका एक ब्राह्मण थिए । उनको हर समय साम्ब सदाशिवको पूजामा व्यतीत हुन्थ्यो । उनी हर अतिथिहरुलाई शिव सम्झिएर राम्रोसँग आदर-सत्कार गर्दथे । उनको शेष समय भगवानको ध्यानमा खर्च हुन्थ्यो। उनको आयु पुरा भइसकेको थियो तर उनलाई यस कुराको ज्ञान थिएन । उनलाई न रोग थियो न शोक, यसकारण आयु पूरा भएको आभास भएन । उनको सारा ध्यान शिवमा केन्द्रित थियो। ... बाँकी अंश»
चिनियाँ प्रहरीको नेपाल अप्रेशन, ‘बुढी मरी भन्दा काल पल्क्यो’ भन्ने डर
२०७६ पौष ९ बुधबार, काठमाडौं। चिनियाँ प्रहरीको संलग्नतामा सोमबार काठमाडौंमा भएको चिनियाँ नागरिक पक्राउलाई ठूलो सफलताको रुपमा प्रचार भइरहँदा यसमा संस्थागत रुपमा छिमेकी देशको हस्तक्षेपकारी भूमिकालाई नजरअन्दाज गरिएको टिप्पणी हुन थालेको छ । ... बाँकी अंश»
फ्लेक्स बोर्डले इज्जत धानेको ‘मेरो सरकार’
२०७६ पौष ८ मंगलबार, किनभने मुलुकको प्रधानमन्त्री नै उनीहरुको खरिदकर्ता हुन् । अझै भन्ने हो भने प्रधानमन्त्रीको ‘नयाँ युग’ आएकै यस्तै फ्लेक्समा हो । ... बाँकी अंश»
समुद्रको पानीलाई मीठो बनाउन चाहन्थे रावण
२०७६ पौष ८ मंगलबार, सत्संग ठूलो भाग्यले पाइन्छ भनि शास्त्रहरुमा बर्णन गरिएको छ , तर मानिसहरू सत्संगलाई छोडेर जान्छन्, सुन्न मन पराउँदैनन् । रावणले लक्ष्मणलाई भन्छन्, लक्ष्मण! म समुद्रको पानीलाई मीठो बनाउन चाहन्थें अनि स्वर्ग जाने सीढी लगाउन चाहन्थे, त्यसको लागि देवताहरुलाई आदेश दिन मात्र बाँकी थियो । तर मैले सोचे यो सबै काम अलिपछि गरौंला, भोलि- पर्सि गरौंला, तर न भोलि आयो, न त पर्सि आयो । त्यो सबै काम छोडेर मैले सुर्पणखाको कुरामा आएर सीतालाई हरेर ल्याएँ, जसको परिणामस्वरूप सारा लंका स्वाहा भयो। यसकारण राम्रो काम भोलिको लागि छोडनु हुँदैन, नराम्रो कामलाई भोलिको लागि छोडनु पर्छ। ... बाँकी अंश»
मीराबाईका गुरु रैदासले सिलाए जुत्ता तर लिएनन् पारसमणी
२०७६ पौष ७ सोमबार, काशी गंगा नदीको किनारमा मीराबाईका गुरु रैदासजी (रविदास) को एउटा सानो झुपडी थियो । त्यसमा उनी आफ्नी पत्नीको साथ बस्थे अनि झुपडीको बाहिर बसेर जुत्ता सिलाउँथे। मानिसहरुको जुत्ता सिलाएर जे-जति पैसा मिल्थ्यो, त्यसैले आफ्नो जीवन निर्वाह गर्थे । ... बाँकी अंश»
प्रधानमन्त्रीको पहरेदारीमा माफियाको शासन !
२०७६ पौष ७ सोमबार, राजाको प्रत्यक्ष शासन समाप्त भएको वितेका २५ वर्षको इतिहासमा पहिलो पटक कसैको नाममा कसैले शासन गरेको प्रकट भयो पछिल्लो समय औपचारिक रुपले नै देखिने गरी । यसले कस्तो गरायो भने दुइतिहाइको संख्याको प्रधानमन्त्रीमा केपीशर्मा ओली छन् भने यता देशको शासन चाहिँ माफियाबाट चलिरहेको छ ! ... बाँकी अंश»
अद्भूत मुक्तिनाथ यात्रा
२०७६ पौष ७ सोमबार, यस्तो भ्रमणले हाम्रो मानसिक र शारिरिक अप्ठ्याराहरु भएपनि रमाइलो र आनन्दीत हुने रहेछ । ... बाँकी अंश»
हात मिलाउनुभन्दा नमस्कार गर्न किन उपयुक्त ?
२०७६ पौष ६ आइतबार, काठमाडौं । हामी कार्यालय तथा घर बाहिर साथी भाइसँग भेटघाट गर्दा हात मिलाएर ‘ह्याण्डसेक’ गर्छौ । ‘ह्याण्डसेक’ हाम्रो मौलिक अभिवादन संस्कार भने होइन । ‘ह्याण्डसेक’ पश्चिमा संस्कृतिको सिको हो । तर पनि, यसले जब्बर संस्कृतिकै रूप लिइसकेको छ। यो संस्कृतिको उद्गमस्थल पश्चिमा मुलुकहरूमा त्यो हदसम्म हात मिलाइँदैन, जसरी ‘नमस्कार’ का सन्तति हामी ‘ह्याण्डसेक’ मा अभ्यस्त भइरहेका छौं। ... बाँकी अंश»
सोह्र बर्षमा सबैभन्दा कम पत्रकार मारिएको बर्ष २०१९
२०७६ पौष ५ शनिबार, काठमाडौं। विश्वका विभिन्न ठाउँमा भइरहेको द्वन्द्व र अनुदारवादी शासन व्यवस्थाका कारण हरेक वर्ष सयौँ पत्रकारको हत्या हुने गरेको छ । तर यस वर्ष भने पत्रकारको हत्याका घटनामा केही कमी आएको छ । सन् २०१९ प्रेस स्वतन्त्रता, पत्रकारिता र लोकतन्त्रका लागि यो तथ्याङ्कलाई केही सुखद् भएपनि सन्तोष मान्ने अवस्था भने नरहेको अधिकारकर्मीहरुको भनाई छ । ... बाँकी अंश»
लुम्बिनीमा गुरुयोजना अनुसारका काम तिव्र गतिमा, ३ बर्षमा लक्ष्य पूरा हुने
२०७६ पौष ५ शनिबार, रुपन्देही । बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई बिश्व शान्तिको केन्द्र तथा लुम्बिनीको योजनाबद्ध बिकास गर्न भन्दै ४१ बर्ष अगाडि लुम्बिनी गुरुयोजना बनेको थियो । ... बाँकी अंश»
२०७६ पौष ५ शनिबार, काठमाडौं। इन्टरनेट पछिल्लो समय सबै मानिसहरुको आधारभूत आवश्यकता नै बनिसकेको छ। समग्र विश्व नै डिजिटलीकरणमा अघि बढिरहेको अवस्थामा इन्टरनेटको यस किसिमको विस्तारलाई स्वाभाविक पनि मान्न सकिन्छ। त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि देख्न सकिन्छ। नेपालमा पनि अन्य क्षेत्रको तुलनामा प्रविधि तथा इन्टरनेटको विस्तार केही तीव्र गतिमा भएको पाइन्छ। ... बाँकी अंश»
डाक्टर केलीले यसरी तिरे एक गिलास दूधको मूल्य
२०७६ पौष ४ शुक्रबार, काठमाडौं । पढाईको खर्च निकाल्नलाई एक गरीब बालकले घर- घरमा गएर समान बेच्ने गर्थे । एक दिन उनको एउटै समान पनि बिकेन । साँझ परिसकेको थियो अनि उनलाई जोडले भोक पनि लागेको थियो। उनीसँग पैसा थिएन । उनले सोचे अब अर्को घरमा खाना माग्ने छु । ढोका ढकढकाए भित्रबाट एउटी बालिका निस्किन् । उनले अफ्ट्यारो माने अनि खानाको सट्टामा एक गिलास पानी मागे। ... बाँकी अंश»
जब नारदले वैकुण्ठमा वीणा विर्सिए
२०७६ पौष ३ बिहिबार, भगवान भन्नुहुन्छ,' नारद जी ! यी सबै ठिक छ तपाई बडो विद्वान हुनुहुन्छ, तपाईले अनेकौ शास्त्र पढ्नुभएको छ तर तपाईले केवल पढेको मात्र हो, त्यसको मर्मलाई जान्नु भएको छैन किनभने तपाई अहिले पनि निगुरे हुनुहुन्छ । तपाईले अहिलेसम्म गुरु बनाउनु भएको छैन । ... बाँकी अंश»
वैकल्पिक राजनीतिले समात्न नसकेको जरो
२०७६ पौष ३ बिहिबार, भनिन्छ परिवर्तनका लागि, सच्चिनका लागि र रूपान्तरणका लागि कहिल्यै पनि समय घर्कदैन । सोचौं । ... बाँकी अंश»